Izindaba - Surface ukwelashwa indlela yokwelashwa kwepuleti le-aluminium
Indlela yokwelashwa ngaphezulu yokwelashwa kwepuleti le-aluminium
Ukuklwebheka ebusweni bamapuleti e-aluminium kungenzeka kakhulu enqubeni yokucubungula i-aluminium plate. Kuvame ukubangelwa ukucubungula okungafanele, okwenza ukuthi indawo yonakaliswe, ethinta kakhulu ubuhle be-plate ye-aluminium. Kodwa-ke, imihuzuko isivele ivele. Lokhu okulandelayo kuchaza ukwelashwa kokuqala komhlaba kwepuleti le-aluminium. indlela.
Ukuklwebheka okungaphezulu kwepuleti le-aluminium kungalashwa. Ngamafuphi, kunezindlela ezimbili: ezomzimba nezamakhemikhali: indlela ebonakalayo ukupholisha imishini, ikakhulukazi i-sandblasting, umdwebo wocingo, njll. Le ndlela ijwayele ukusetshenziselwa ukuklwebheka okujulile. Izindlela zamakhemikhali ngokuvamile zisebenzisa ama-reagents amakhemikhali ukupholisha. Ngamafuphi, ama-reagents amakhemikhali asetshenziselwa ukonakalisa ingaphezulu le-aluminium. Imikrwelo inemiphetho ebukhali futhi isivinini sokugqwala siyashesha. Ukuklwebheka okulula kungasuswa ngokuphelele ngemuva kokupholishwa kwamakhemikhali. , Izinto ezipholishiwe zamakhemikhali zinokubukeka okugqamile futhi okuhle. Ngokuvamile, lezi zindlela ezimbili zisetshenziswa ndawonye, ​​futhi ukubonakala kwe-aluminium kungafinyelela umphumela omuhle wokuhlobisa.
Isixazululo sokuklwebheka ebusweni bepuleti le-aluminium:
1. Ibhande elisebenzayo ku-alloy aluminium plate mold lifanele lipholishwe kahle, noma ngabe ummese ongenalutho wesikhunta se-extrusion wenele, nokuthi ngabe indawo ibushelelezi.
2. Enqubeni yokukhiqiza amapuleti e-alloy aluminium, naka ukukhiqizwa kwemigqa yesikhunta. Lapho imigqa isikhiqiziwe, isikhunta sidinga ukulayishwa ngesikhathi ukumisa ukukhiqizwa.
3. In inqubo aluminium ipuleti isaha: sawing ngamunye udinga ukuhlanza sawdust ahlabayo ngesikhathi. Vimbela imihuzuko yesibili.
4. Ngokufanayo, enqubeni ye-CNC machining aluminium plate, kuyadingeka futhi ukuvimbela i-residual aluminium slag esisekulungisweni ukuthi ingaklwebheki.
5. Kukhona okufakiwe okunzima kumaphrofayli we-aluminium wezimboni oveziwe noma imichilo ye-graphite ethrekhi yokukhipha noma embhedeni wokujikisa. Gwema imihuzuko ebusweni bepuleti le-aluminium lapho imfucumfucu eqinile ixhumana nepuleti le-aluminium.
6. Enqubeni yokukhiqiza nokuphatha, phatha ngokunakekela bese uzama ukugwema ukuhudula noma ukuphephetha ipuleti le-aluminium alloy ngentando.
7. Hlela amapuleti e-aluminium ngokufanele futhi uzame ukugwema ukungqubuzana.